कुर्कुच्चा फुट्यो, के गर्ने
अतुल मिश्र उनी हाई हिललगायतका अन्य चित्ताकर्षक स्यान्डिल लगाउँदिनन् । अनुहार र जीउडालले अत्यन्त आकर्षक युवा भए पनि उनी सकेसम्म कुर्कुच्चा छोपिने गरी बनाइएको स्यान्डिल लगाउँछिन् । यसो गर्नु उनको रहर नभई बाध्यता हो । उनी कुर्कुच्चा फुट्ने समस्याले पीडित भएकाले यस्तो गरेकी हुन् ।
धेरै जना बेहोस हुने ‘मास हिस्टेरिया’ के हो ?
डा. पुष्पप्रसाद शर्मा हिस्टेरिया भन्ने शब्दलाई आजकल मनोरोग विशेषज्ञहरुले त्यति प्रयोगमा ल्याउँदैनन् । हाम्रो समाजमा व्याप्त हिस्टेरिया शब्दलाई यौनसमस्यासँग जोड्ने गलत प्रवृत्ति छ । यसकारण यसलाई होसियारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । केही वर्षएतादेखि डिस्सोसियटिभ डिसअर्डर नै मानसिक रोगसम्बन्धी पुस्तकहरुमा हिस्टेरियाको पर्यायवाची शब्द बनेको छ ।
दिसा गर्दा किन पीडा हुन्छ
पायल्स भनेको के हो ? कृपया यसको बारेमा बिस्तृत रुपमा बताईदिनु हुन्छ कि? मलाइ दिसा गर्दा एकदम पीडा हुन्छ ।
मुख मैथुन कत्तिको सुरक्षित
म ३३ बर्षको विवाहित पुरुष हुँ । हामी श्रीमान् श्रीमती खुलेर यौन सम्पर्क राख्ने गर्छौ । श्रीमतीसंग यौन सम्पर्क राख्नु अगाडी मलाई मुख मैथुन गर्न मन लाग्छ र मेरी श्रीमती पनि योनी मुख मैथुन गराएर यौन सम्पर्क राख्दा बढी आनन्दित हुन्छिन् । तर पनि उनी मुख मैथुनमा अग्रसरता देखाउछिनन् । उनी यसलाई फोहोरी काम भन्छिन् र उनलाई राजी गराउन निकै गाह्रो हुने गरेको छ । उनलाई कसरी संझाइ मुख मैथुनमा अग्रसर गराउने होला ?